ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့် စက်ရုံ - တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ
မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး pad စက်
ယက်မဟုတ်သော စာရွက်စက်ဆီသို့ လိပ်
perforation slitting rewinding စက်
wet wipes စက်
R&D နှင့် ထုတ်လုပ်မှု
စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်မှုနိယာမ- ကုန်ကြမ်း ၃ လိပ်စာကျွေးခြင်း- - အထည်အလိပ်များပေးပို့ခြင်း - ပူပြင်းသောအရည်ပျော်ခြင်း - - အရှည်လိုက်ခေါက်ခြင်း - စာရွက်ဖြတ်ခြင်း - - ခေါက်ခြင်း3ကြိမ် - - ခေါက်ပြီးအောင်ပြုလုပ်ခြင်း - ထုပ်ပိုးခြင်းစက်ဆီသို့ - ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း - ထုပ်ပိုးမှုအပြီးသတ်။အလိုအလျောက်ခေါက်စက် (အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဖျာ၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာဖျာခေါက်စက်၊ အိပ်ယာခင်းရေချိုးသုတ်ပုဝါခေါက်စက်၊ ဆေးစာရွက်ခေါက်စက်) 1. စက်ပစ္စည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများ- 1. စက်ကိရိယာများ၏ လုပ်ဆောင်မှုနိယာမ- ပို့ဆောင်ခြင်း → အလိုအလျောက် ဒေါင်လိုက်။ .
DL-C600 Interlock Non-Woven Folder စက်
စက်ပစ္စည်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံသွင်ပြင်လက္ခဏာများ- 1. Dimensions: 4300mm*1650mm*2000mm ထိရောက်သောအနံ- 600mm 2. စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာ- A. ဤစက်သည် ယက်မဟုတ်သောအထည်ကို ခရုပတ်ဓားဒလိမ့်တုံးဖြင့်ဖြတ်ကာ စတုဂံကွင်းဆက်တစ်ခုအဖြစ် အပြန်အလှန် ခေါက်ခြင်း၊ ယက်မဟုတ်သောအထည် B. ဤစက်သည် မြန်နှုန်းမြင့်၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ခေါက်ခြင်းနှင့် လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှု၏အားသာချက်များဖြစ်သည့် ဖုန်စုပ်စုပ်စုပ်မှုအလိုအလျောက်ခွဲခြမ်းခြင်းနှင့် ရေတွက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို လက်ခံလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
အလိုအလျောက် တစ်ခါသုံး ဖိသိပ်ထားသော မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ပြုလုပ်သည့်စက်
စက်ဖော်ပြချက် ဤသည်မှာ တစ်ခါသုံး ဖိသိပ်ထားသော မျက်နှာသုတ်ပုဝါများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။စက်သည် လည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ကုန်ကြမ်းမှ compress ပြီးစေရန် ဆလင်ဒါကို servo motor ထိန်းချုပ်ရန် စက်ကိုအသုံးပြု၍ PLC နှင့် servo motor ကိုအသုံးပြုသည်။အော်ပရေတာတစ်ခုသည် စက်ပစ္စည်းများစွာကို လည်ပတ်နိုင်သောကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် အလွန်မြင့်မားသည့်အပြင် လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း ထိရောက်စွာလျှော့ချပေးပါသည်။1.2 စက်နည်းပညာ ကန့်သတ်ချက်များ စက် မော်ဒယ် နံပါတ်- DL-C300 ထိန်းချုပ်မှုမုဒ် ： PLC ထိန်းချုပ်မှု စက်အရွယ်အစား (m...
DL-V290 အလိုအလျောက်ယက်မဟုတ်သော ဖုန်မှုန့်/ဇကာအိတ်ပြုလုပ်သည့်စက်
အဓိကလက္ခဏာများ: ၁။ဤစက်ကို ယက်မဟုတ်သော ဖုန်မှုန့်အိတ်များနှင့် အပေါက်များပါရှိသော လေစစ်အိတ်များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ အိတ်များသည် သပ်ရပ်သောဖြတ်တောက်ထားသော အစွန်းများနှင့် တံဆိပ်ခတ်မှုအားကောင်းပါသည်။2. လုပ်ငန်းစဉ် : အစာကျွေးသည့်ပစ္စည်းများ—ပုံနှိပ်ခြင်းပုံစံ—-အီလက်ထရစနစ် ဖောင်းကြွခြင်း—-လက်ဖြင့်နှိပ်ခြင်း—-ဘေးထွက်အပိတ်အပိတ်—–အရှည်ဖြတ်တောက်ခြင်း—–အော်တိုအကွက်များ 3. စက်တွင် အများဆုံး 8 အစုံပါသော ကုန်ကြမ်းအစာကျွေးယူနစ်များ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုချိန်ညှိစနစ် ၊ manual EPC (အစွန်း...
Nonwoven Perforating Slitting Rewinding စက်
စွမ်းဆောင်ရည်ဝိသေသလက္ခဏာများ အလိုအလျောက်ပြန်ရစ်ခြင်းနှင့် ဖောက်ထွင်းခြင်းစက်သည် အဆင့်မြင့် PLC ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် ထောက်လှမ်းခြင်းနည်းပညာကို လက်ခံပါသည်။ကြိမ်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနိုင်သော ချိန်ညှိမှု၊ အီလက်ထရွန်းနစ် ဘရိတ်ဖမ်းခြင်း။Man-machine interface နှင့် များစွာသော function device;ယခင်လက်စွဲစာအုပ်နှင့် semi-automated အလယ်တန်းလက်စွဲပြန်ရစ်ခြင်းအစား အလိုအလျောက်ပြန်ရစ်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်း။လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို တိုးတက်စေခြင်း၊ အလုပ်သမား ပမာဏ လျှော့ချခြင်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခလစာ ပြဿနာများ။တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်...
DL-SQ Square အမျိုးအစား မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး ချည်သားအပြားစက်
1. စက်ကိရိယာ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာနိယာမ- အလိုအလျောက်ဖြေလျှော့ခြင်း → ဖောင်းကြွခြင်း → အရှည်လိုက်ဖြတ်ခြင်း → အလျားလိုက်ဖြတ်ခြင်း → ဘယ်နှင့်ညာ လွှဲရေတွက်ခြင်း → စီစဉ်မှုအထွက်အား အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။2. အရင်းအမြစ်သည် 380V;ကြိမ်နှုန်းသည် 50Hz;စုစုပေါင်းပါဝါ 5.5kw ဖြစ်ပါတယ်။3. စွမ်းရည်- 1800-2000pcs/min 4. အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှု အကျယ် : 900mm၊ ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား- 50*60mm (ပုံသေရုပ်ကြွဖောင်းကြွအရွယ်အစား) 5. စက်ကိရိယာတွင် ခရုပတ်3ခု တပ်ဆင်ထားပြီး တိကျသော oxidized အလူမီနီယံအလွိုင်း ရှုံ့ချခြင်းကို ဖယ်ရှားခြင်း အသုံးစရိတ်အတွက် ကြိတ်စက်များ...
ချိန်ညှိနိုင်သော Nonwoven rolls များကိုဖောက်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်းနှင့် ပြန်ရစ်ခြင်းစက်
1. စက်၏တောင်းဆိုချက်- ဖောင်းကြွခြင်း၊ ဖောက်ထွင်းခြင်း၊ ရေတွက်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပြန်ရစ်ခြင်း။2. ကုန်ကြမ်း၏ ထိရောက်သော အကျယ်မှာ 1850mm ဖြစ်ပြီး ကုန်ကြမ်း၏ အမြင့်ဆုံး အချင်းမှာ 1000mm ဖြစ်သည်။3. စက်တွင် အလိုအလျောက်ရပ်တန့်သည့်လုပ်ဆောင်ချက် (အနီအောက်ရောင်ခြည်၊) ပါဝါသည် 3.5 KW ဖြစ်သည်။4.Rewinding roller တွင် ပြန်ရစ်ခြင်းအမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်သည့် အဆင့်နည်းသောကိရိယာ ပါရှိသည်။5.Feeding အပိုင်းတွင် ကျယ်ပြန့်သောသိုင်းကြိုးလွှဲပြောင်းကိရိယာပါရှိပြီး အဆင့်နည်းသော ဆန့်နိုင်အားချိန်ညှိကိရိယာ၊ pneumatic synchronous transferring ပါရှိသည်။မှန်ကန်ပြီး ခိုင်ခံ့မှုရှိပါတယ်...
အလိုအလျောက် ယက်မဟုတ်သော အိပ်ယာခင်းများ ခေါက်ခြင်းလုပ်ငန်း
ကုန်ပစ္စည်း ကန့်သတ်ချက်များ မော်ဒယ် DL-F2200 ပါဝါထောက်ပံ့မှု 380V/50HZ ပါဝါ 8.5KW အကောင်းဆုံး အမြန်နှုန်း 60-80pcs/min စက်အရွယ်အစား 10500*2400*2650mm အလေးချိန် 3500KGS ပင်မအင်္ဂါရပ်များ 1.1 စက်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ- စက်သည် လေပူမဟုတ်သော ယက်လုပ်ခြင်းအမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ အထည်၊ လိပ်ထည်၊အပ်စိုက်ကုထုံး၊ စပွန်ဘွန်းထည်၊ SMS၊ စက္ကူ-ပလပ်စတစ်နှင့် အခြားကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ။1.2 စက်လည်ပတ်မှုနိယာမ- အလျားလိုက်ခေါက်ခြင်း → အရှည်ကို အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း → Transverse foldi...
အလိုအလျောက် ယက်မခေါက်ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
1. 600mm ခေါက်စက်အရွယ်အစား- 4.80*1.30*1.80m(L*W*H) ခန့်။2. စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည်- a.spunlace Nonwoven;ခဓာတု-ချည်နှောင်ထားသော Nonwoven;ဂ။အပ်-ထိုးစက် Nonwoven;ဃAir-laid paper စသည်တို့ 3. စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်- A. ခေါက်;B. ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သပ်ရပ်သောဖြတ်တောက်ထားသော အစွန်းများရှိသော ခေါက်အထည်များကို ဖြတ်တောက်ရန် ကြိုးလွှကိုအသုံးပြုပါ။ဂ။ ချပ်ချပ်များကို အဆုတ်ရေတွက်ခြင်း။သင်အလိုရှိသောနံပါတ်ကိုသင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။D. မြန်နှုန်းနိမ့် ပြေးခြင်းနှင့် မြန်နှုန်းမြင့် ပြေးခြင်းကို အဆင့်နည်းသော အမြန်နှုန်း ချိန်ညှိကိရိယာဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သည်။E. ခေါက်နည်းကတော့ cha...
အိပ်ယာခင်းစက် အိပ်ယာစာရွက်ခေါက်စက် တစ်ခါသုံးမဟုတ်သောယက်မခေါက် Folder Nonwoven ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာခင်းအဖုံးလုပ်စက်
အမြန်နှုန်း 60-80pcs / မိနစ် ဗို့အား 380V 50HZ ပါဝါ 6.5kw စက်အလေးချိန် 5000kgs စက်အရွယ်အစား 9900*2800*2150mm (L*W*H) ထုတ်လုပ်မှုအတိုင်းအတာကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
အရွယ်စုံ စားပွဲခင်း ခေါက်စက် ခွဲစိတ်ခန်း အမိုးနှင့် အိပ်ယာခင်း ခေါက်စက်
အမျိုးအစား DL-1000 ထုတ်လုပ်မှုအမြန်နှုန်း 50-80pcs/min ထိရောက်သောခေါက်ဒု 1000mm လျှပ်စစ်ရင်းမြစ် 380v/50Hz စုစုပေါင်းပါဝါ 8.5kw Dimension 5.62*1.2*2.8m အလေးချိန် 3500kg ပင်မလက္ခဏာ 1. စက်သည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏ မိတ်ဆက်မှုအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ကြီးမားသော ခေါက်စက်မှ ထုတ်ကုန်များ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး 2. စက်သည် ကုန်ကြမ်းများကို ဒေါင်လိုက်ခေါက်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ထို့နောက် အလျားလိုက်၊ တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် ခေါက်နိုင်သည်။အလိုအလျောက်ရေတွက်ပြီးနောက်၊ အလိုအလျောက် ...
ယက်မဟုတ်သော ဆေးထိုးအပ် အပေါက်ဖောက်ထားသော သန့်ရှင်းရေးလုပ် လျှော်ဖွပ် ခေါက်ဖြတ်စက်
ဤစက်သည် ခေါက်ထားသော Nonwoven cleaning wipes ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် မြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် လည်ပတ်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။1. 380mm ခေါက်စက်အရွယ်အစား- 3.5*1.0*1.7m (L*W*H) ခန့်။2. ကုန်ကြမ်းကျွေးနိုင်သော အမြင့်ဆုံးအကျယ်မှာ 400mm ဖြစ်သည်။3. ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်- A. spunlace Nonwoven;B. ဓာတု-ချည်နှောင်ထားသော Nonwoven;C. အပ်ထိုး-ထိုးစက် Nonwoven;D. Air lay paper စသည်တို့ 4. ကုန်ကြမ်းအတွက် သီးခြားဆွဲငင်အားမှာ 30-150g/m2 ဖြစ်သည်။5. စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်- A. ပုံနှိပ်ခြင်း;B. ခေါက်;C. ဖြတ်တောက်ခြင်း;(u...
လိပ်စာ- Xiangtun အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်မှုပန်းခြံ Dexing မြို့ Shangrao မြို့ Jiangxi ပြည်နယ် တရုတ်နိုင်ငံ